IiFowunisayithi: Yenza iiWebhusayithi zeeNtengiso zeNtengiso kunye namaPhepha okuLanda ngeMizuzu usebenzisa ifowuni yakho | Martech Zone
Oku kunokubacaphukisa abanye abantu kwishishini lam, kodwa iinkampani ezininzi azinayo imodeli exhasa utyalo-mali kwindawo enkulu yokusasazwa kunye nesicwangciso sokuthengisa umxholo. Ndazi amashishini amancinci ambalwa asahamba kwindlu ngendlu okanye axhomekeke kwilizwi lomlomo ukuxhasa ishishini elinomtsalane.
Iifowuni: Qalisa amaPhepha ngeMizuzu
Ishishini ngalinye kufuneka lilinganise ixesha lomnini walo, inzame, kunye notyalo-mali ukuvelisa eyona nkqubo isebenzayo yokuthengisa ukuzisa ishishini elitsha. Ngamanye amaxesha, utyalo-mali kwiwebhusayithi lulula nje ngokubamba isizinda kunye nokubeka iphepha elicocekileyo, elilula, eliphendula ngeselula, kunye nelilungiselelweyo. Yiloo nto kanye Iimfonomfono yeya...
Khetha itemplate okanye uqale ekuqaleni. Iitemplate ezenziwe kwangaphambili zifakela ngokucofa oku-2.
Qala ukwakha amaphepha ngokongeza umbhalo, imifanekiso, kunye nevidiyo ngomhleli wazo wokutsala nokulahla ngokulula.
Faka uphawu kwisiza usebenzisa isizinda sakho kwaye udibanise nawaphi na amaqonga omntu wesithathu owasebenzisayo.
Misela iimpendulo ezizenzekelayo nge-imeyile okanye ulandelelwano lweSMS.
Khulisa ukufikelela kwakho ngokusebenzisa intengiso kunye nekopi eqhutywa yi-AI.
I-Phonesites idibanisa iitemplates ezinamandla, ukuqokelela idatha, kunye nomxholo oqhutywe yi-AI ukunceda amashishini okanye ii-arhente zikhupha iindawo eziphezulu zokuthengisa eziqhutywe kwi-funnel kwimizuzu.
Iimfonomfono incede amashishini angaphezulu kwe-10,000 ukuba enze ngaphezulu kwe-1 yezigidi ezikhokelayo kwaye aguqule ezo zibe zizigidi kwingeniso. I-Phonesites yiwebhusayithi engenabuhlungu kunye nomakhi wephepha lokufika oya kuthi uvelise iinkokeli ezininzi, abathengi abaninzi, kunye neentengiso ezininzi. IiFowunisayithi zenza amashishini amancinci kunye neearhente:
Amaphepha okwazisa kwimizuzu nakwesiphi na isixhobo. Umakhi wabo wewebhusayithi ubonisa ukwakhiwa kwangaphambili, iitemplates eziphezulu zokuguqula onokuzisebenzisa ukuze wenze indawo yakho yakhiwe ngemizuzu nje.
Ukuqokelela iiNkokeli kunye nokuqeshwa kweencwadi. Yakha amaphepha alula akhokela iindwendwe kwinkqubo yakho yokuthengisa inyathelo ngenyathelo ngelixa uqokelela idatha kunye nendlela ukuze ukwazi ukulandela.
Yenza umxholo -Unokwenza ikopi yokuthengisa eguqukayo ephezulu ngokucofa nje okumbalwa ngoMbhali we-AI weFowunisite.
Ukulandelelwa kwe-imeyile -Akukho mfuneko yenkqubo ye-imeyile, iiFowunisayithi zenkqubo ye-imeyile eyakhelwe-ngaphakathi ikuvumela ukuba uthumele ukulandelelana ngokuzenzekelayo.
Fumana Uncedo -Thepha kwiQela leeNgcali ukuze uncede ngomnxeba woku-1-on-1, incoko ebukhoma, uluntu lwabucala, kunye neendibano zocweyo zeveki.
Nayiphi na inkqubo yolawulo lomxholo (CMS) idinga amandla okudibanisa ukuphucula kunye neempawu zokongeza kunye nokusebenza. Iifowuni zahlukile, ngokudityaniswa kwemveliso kwiZapier, MailChimp, Stripe, Twilio, Vimeo, YouTube, Google ReCaptcha, Facebook Ads, Google Analytics, Hotjar, Calendly, kunye nokunye.
Qala iSilingo sakho sasimahla seeFowuni
Ukubhengezwa: Ndililungu le Iimfonomfono kwaye ndisebenzisa ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: ikhalendaTsala kwaye ulahle umhleliIintengiso ze-facebookiifomui-google analyticsIRecaptcha kaGoogleishushuumakhi wewebhu wephepha lokufikamaphephaingqokelela ekhokelayomailchimpiifowuniifomu yokuthengisaumakhi wefenitshala yokuthengisaiziza zokuthengisangombalaTwiliobedlalawebsite Umakhiyoutubezapper
I-Spocket: Qalisa kwaye ngaphandle komthungo udibanise iShishini elilahlayo kunye neqonga lakho le-Ecommerce
I-Retina AI: Ukusebenzisa i-AI eQikelelayo ukuSebenzisa amaPhulo eNtengiso kunye nokuseka iXabiso loBomi boMthengi (CLV)